बिल गेट्सलाई झु’क्याएर एक पाकिस्तानीले १२ अर्ब रुपैयाँ ठगे ! – Nepal Online Khabar
बिल गेट्सलाई झु’क्याएर एक पाकिस्तानीले १२ अर्ब रुपैयाँ ठगे !
भाद्र १२, २०७८ शनिबार 209
काठमाडौं : संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरुमध्येका एक बिल गेट्स पनि ठ’गीको शि’कार भएका छन् । एक पाकिस्तानी व्यक्तिले बिल गेट्सलाई झु’क्याएर झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ ठ’गी गरेका छन् ।
Prevएमालेसँग एक्लै लड्न कसैले सक्दैन : ओली !
Nextपाँच दलीय गठबन्धनलाई जोगाउनु मेरो क’र्तब्य हो :- अध्यक्ष दाहाल !